Yintoni ibhlog? | Iindaba zeGajethi
Yintoni ibhlog?, Yile nto undibuze kumhlobo ngenye imini kwaye nangona ndizamile ukucacisa ukuba yintoni ibhlog Andiqondi ukuba ndikwazile ukukucacisela ngokucacileyo ngokwaneleyo. Ke ndimxelele ukuba ndiza kupapasha inqaku elichaza ukuba yintoni ibhlog ngamagama anokuqondwa ngumntu wonke.
Kuyatshiwo oko into umntu angayazi ukuba angayichaza njani kakuhle ngoba akayazi, kodwa ndicinga ukuba le ngxelo inxulumene noko. Ngubani onokuchaza ngokucacileyo ukuba yintoni ubomi, ukanti sinako ukwahlula into kubomi kunento engenabo, ubuncinci phantse rhoqo.
Ukucinga ngale nto ndiyacinga eyona ndlela yokuqonda ukuba yeyiphi ibhlog kukubona ukuba yintoni ibhlog kwaye yintoni engeyobhlog. Ukwahlula siza kubona ukuba ziyintoni, ngokoluvo lwam, izinto ezimbini ezahlukileyo zebhlog kwaye ekugqibeleni ukudityaniswa okubanzi iinkcazo zebhlog Yenziwe ngu Víctor (Ibhlog ebaluleke kakhulu).
Njengomzekelo ndiza kuthatha amaphepha amabini okupheka, enye ibhlog, Iresiphi yebhlog yam, kwaye enye ayiyiyo ibhlog. Ngoku siyabona kutheni.
Ukupheka kweJavi Yibhlog zokupheka kunye ingqiqo Yintoni eyahlula njengebhlog kukuba ibhlog kufuneka ihlale ine Ukuthunyelwa ngokulandelelana kwezithuba (iindaba, amanqaku, iposti, njlnjl) ukuze nabani na otyelele ibhlog yakhe azi ungeniso olwapapashwa ngaphambili nasemva kwalo.
Ndiyithathile le bhlog njengomzekelo kuba isihloko sayo (ngaphezulu kwephepha) inezinto ezinamaphepha ewebhu angezizo iibhloko, njengokuba kunjalo kwimenyu yemizobo enika ukufikelela kumacandelo ahlukeneyo ephepha (kule meko izitya ezicetyiswayo).
Yintoni engeyiyo ibhlog?
Ikhitshi kunye nephepha lasekhaya yi umzekelo olungileyo wephepha lewebhu, nakwiindlela zokupheka, engeyiyo ibhlog. Ungayibona ngandlela thile i Ukupheka kweJavi Iyafana kakhulu nekhava yeli phepha, kunye nemifanekiso enika ukufikelela kumacandelo ahlukeneyo.
Enye ibhlog kwaye enye ayisiyiyo ngenxa yokuba enye ayinanto yokwahlulahlula ibhlog nganye, umboniso ngokulandelelana (ngokulandelelana kwawo) amangenelo (iiresiphi).
Nokuba ukhangeleka kangakanani, awuyi kufumana iiresiphi (amangeno) eqweqwe, ahlelwe ngokulandelelana kwawo, ke ngoko ayinanto esisiseko eyimfuneko kwibhlog.
Ngaba le bhulogi okanye akunjalo?
Kunokubakho iimeko apho ngaphandle koku kungasentla unamathandabuzo malunga nokuba iphepha alikho ibhlog. Oku kuhlala kwenzeka xa udibana nephepha elingelilo ibhlog kwiphepha langaphambili, kodwa kamva ibhlog yakho ifakwe ngaphakathi. Umzekelo olungileyo ngu Ingosi yesisu seChefuri.com njengoko igama layo libonisa yindawo (koko kukuthi ayisiyo ibhlog) kodwa ngaphakathi ungayifumana enkulu iresiphi blog njengenxalenye edityanisiweyo yaloo portal.
Le portal inye (iphepha lewebhu elinokufikelela kumacandelo aliqela elinomxholo owahlukileyo kunye nolwakhiwo) linokusikhupha omnye umbuzo onokuvela xa usenza isigqibo sokuba iphepha liyibhlog okanye hayi.
En Chefuri.com sinokufumana kwakhona iforum yokupheka ebonisa ukuthunyelwa ngokulandelelana kwezithuba (njengeeblogi) kodwa ayisiyo blog. Umahluko phakathi kokulala okumbini ku Icandelo lesibini lokwahlulahlula, ngubani ophethe umthwalo wokupapasha izithuba (iiresiphi, amanqaku, njl. Kwiibhloko amangenelo abhalwa ngumntu omnye okanye nangaphezulu (iibhlog) kodwa kwinani eliqingqiweyo. Kwiiforamu amangenelo anokupapashwa ngabasebenzisi abaninzi abanokubhalisa ngokukhululekileyo kwiforum, ukupapashwa akuxhomekekanga kumntu omnye okanye ababini, ngabasebenzisi, kwaye ayingabo abanini bebhlog, abapapasha uninzi lwamanqaku.
Kunjalo kukho iibhlog zokupapasha ezisebenzisanayo, kodwa zizodwa kwaye akukho meko abanakuba nenombolo yomsebenzisi elingana naleyo yeeforum ezinokufikelela kumawaka ababhalisiweyo.
Ke ngoku uyazi, xa ufumana isiza kwaye ubona ukuba sinokupapashwa ngokulandelelana (omnye emva komnye ngokulandelelana ngokulandelelana kwexesha), ukuba siqhutywa ngumntu omnye okanye ababini kwaye ukubhaliswa njengomsebenzisi akuvumelekanga ngokungagqibekanga. akufuneki ungathandabuzi ukuba uphambi kwebhlog.
Ngapha koko, ukuba ufuna ukuba neenkcazo ezisesikweni nezichanekileyo malunga nokuba yeyiphi ibhlog, yiya kuyo Ibhlog kaVictor (Ibhlog enzulu) kwaye ufunde ukuba yintoni ibhlog yeWeblogsSL, yintoni ibhlog yakho Ibhlogia ewe Inkcazo yento blog de la Wikipedia. Inqaku elihle elivela Víctor ukuze ungaphoswa. Imibuliso yeVinegary.
PD: Ngendlela, kwaye ukuba awukafumani okwangoku, le yibhlog 😉
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Yintoni ibhlog?
Ingcaciso entle kakhulu !!
Ngaphandle koloyiko sitsho
Ndiyakholelwa, ngokoluvo lwam, ukuba uyilibele eyona nto ibalulekileyo yokuchaza ibhlog, kwaye ke ngoko yahlule kwiwebhusayithi.
Ndithetha ngempendulo, into eyenzeka kwiiblogi, kwizithuba zabo kunye nakumanqaku, kwaye oko akunikiwanga, kuhlala kwiwebhusayithi.
Ndicinga ukuba ngamagqabantshintshi uvula isidingo sokutshintshisana esinazo iibhlog zethu.
Kungenxa yoko le nto ndingabaqondiyo abantu abanebhlog kwaye banezimvo ezivaliweyo, ngaphandle kwale feddback, bajika ibhlog yabo ibe yiwebhu emileyo.
Okokuqala, enkosi ngokuthatha iwebhusayithi yam njengomzekelo wokubonisa inqaku.
Ngokusisiseko ibhlog yam iyancedisana kwiwebhu, elinye icandelo apho sibeka khona amanqaku kunye nezinye izinto ezingahambelaniyo kwiphepha langaphambili lesango. Nangona kunjalo, ndiyaqonda ukuba kanye njengokundwendwela iwebhu kuhlala kuzinzile, ezo zebhlog zihlala zikhula. Nangona ndingonwabanga ngenani lababhalisi: D. Kwiminyaka embalwa edlulileyo bendinencwadana ebibhaliswe malunga nabasebenzisi be-3000 kwaye ngoku ibhlog yayo ayifikeleli nakwi-100 ...
Ngoku "ukhuphiswano" alusenzi izibuko, lwenza ngokuthe ngqo iiblogi ezinokwenziwa kwaneeyure. Kwaye bafumana ukufaneleka okukhulu ngexesha elifutshane ngenxa yendlela ebukhali ngayo inkqubo yokubhloga. Ngemigca nje embalwa ungenza ungeno kuso nasiphi na isihloko esikuluhlu oluhle kakhulu. Kungenxa yokuba ufumana amakhonkco amaninzi anebhlog kunaleyo.
Isishwankathelo, okwangoku kungcono ukuba nefama yebhlog yezihloko ezininzi, ezidityanisiweyo. Kwaye ngakumbi amatikiti onawo, ngcono. Kunokuba ube ne-portal enamacandelo.
Kulungile luluvo lwam namhlanje.
Ngendlela yerekhodi, andichasananga nokubhloga, ngokuchaseneyo ndiyibona njengengaphambili enkulu kuba yenza lula ukuba newebhusayithi. : D.
@Sin Ukoyika, ndiyavuma ukuba yinto esisiseko, njengabanye abaninzi, kodwa ayisiyiyo umahluko kwibhlog, nangona iluphawu. Kukho amaphepha evidiyo afana neYouTube apho ungashiya khona izimvo kwaye ayisiyo ibhlog.
@Chefwww uyayihoya into yokuba sendisele ndiyazi ukuba uyazithanda iibhloko, into ekufuneka uyigcinile engqondweni kukuba kule mihla ibhlogi yeyona ndlela yokupapasha ukuba ufuna ukuvana noGoogle, ke ukuba ufuna ukufikelela kubaphulaphuli abaninzi ngeyona nto Yibhlog.
Kulungile ukucaciswa kwakho ukuba yintoni ibhlog, nokuba kunjalo ndijongile kwikhonkco kwaye ngakumbi le (yeBhlog nzulu), ilunge kakhulu.
Ngendlela, bendifuna ukukubulela ngokuba nomculo kwibhlog yam namhlanje enkosi kwiingcaciso ezilula osinike zona.
Ndifakele uIvoon, kwaye ndiyavuya.
Enkosi kakhulu kuJavier, ngokwenza kwalula kuthi kuthi abangenazo izakhono zekhompyuter.
Kucacisiwe kakuhle, kwaye umahluko omkhulu phakathi kwebhlog kunye newebhusayithi engekho. Ngamafutshane, kwaye xa endibuza, ndiyaphendula ukuba liphepha lewebhu, apho ndipapasha khona amanqaku. (kwisishwankathelo esifutshane kakhulu)
Kodwa ndicinga ukuba eli nqaku lisadidekile, ndicinga ukuba ingafundwa ngumntu ongaziyo ukuba sithetha ngantoni. Unokwenza uvavanyo ukubona ukuba umhlobo wakho emva kokuba le nkcazo icacile Yintoni iBlog? Obo bubungqina obunokuphikiswa ukuba inqaku eliphambili.
@Lisebe ndimise ibhlog yakho kwaye unencasa emnandi ngomculo owubekileyo kwibhlog yakho.
@komoloves kuzakufuneka ndenze uvavanyo 🙂
@Cheffwww, ibhlog yakho ophawula ngayo inayo, masithi, izithuthi ezamkelekileyo kodwa akukho nto igqithisileyo, oko kukuthi, banokuba nohambo lwama-5.000-7.000 olukhethekileyo lwemihla ngemihla kwaye kolo luhlu lotyelelo uncedo luyingqondi. Akukho mfuneko yokuhlawula kakhulu ukugcina loo mali idluliswayo kodwa yenye into onokuyenza okanye hayi.
Ndiyakholelwa ukuba ibhlog inokuba yinzuzo njengephepha lewebhu, kodwa rhoqo ukuba siyilinganisa kwinani lotyelelo kunye nemixholo.
IWebhusayithi yam ayisiyo ibhlog, kodwa ungayisebenzisa njengomzekelo naphi na xa ufuna 🙂 Okokuqala ayiyiyo ibhlog kuba ayizivezi iiresiphi okwethutyana, kodwa inelungelo lokufumana iiresiphi ngokungaphezulu ngendlela elungeleleneyo, ngokwendidi zazo, nangokwinjini yokukhangela, ekhangela ngqo kwindawo yokugcina izinto.
Kwaye ngokubhekisele kwinzuzo, ndicinga ukuba inento yokwenza nenyaniso yokuba ibhlog yokunyaniseka kwabafundi kakhulu, kwaye ukugcwala akukho nzuzo kangako kumvuzo ngonqakrazo olunye, kodwa kunokuba luncedo kakhulu xa sihlawulisa amawaka .
@Iresiphi ndiyabulela ngegalelo lakho 🙂
Andicacisi ukuba yintoni ibhlog, uxolo.
inkampu yam kunye nam sitsho
molo ndifuna ukwenza ibhlog
Phendula kwinkampu yam kunye nam